कसरी गर्ने सरकारको काम विश्लेषण ?::Online News Portal from State No. 4
कसरी गर्ने सरकारको काम विश्लेषण ?
सुन तस्करी यो सरकार बनेपछि भएको होइन, उनीहरूकै पालामा भएको हो ।
नेपाल सरकारले हाल लागू भएको फौजदारी संहिता बमोजिम अनुसन्धान गर्दा बदनियत चिताई वा लापरबाही गरी प्रमाण नष्ट गर्ने वा गर्न लगाउने उपर सजाय गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो कानुन हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित अधिकारीले निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या काण्डको प्रमाण नष्ट गरेको स्पष्ट भएको छ । बलात्कार भएको ठाउँ, मृतकको लास, लासमा भएका कपडा सुरक्षित राख्नु पर्नेमा ती सबै कुराको प्रमाण नष्ट गर्ने काम गरेको देखिएपछि पनि किन कारबाही अगाडि नबढाएको ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सकेको छैन सरकारले ? र, शायदै सक्ला पनि !
सरकारले स्थापित नयाँ व्यवस्थामा सर्वत्र सुधार गर्नपर्ने देखिएकोले सुधारको कार्य थालनी गरेको छ तर जुन कुरा शुरुमा देखिँदैन, बीचमा पुगेपछि देखिन्छ र अन्तमा प्रतिफल नै प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा जनतालाई जानकारी गराउन सकेन । जस्तो घर बनाउँदा जग हालेर सो जग पुरेपछि जग हालेको कुरा सहज तरिकाले देखिँदैन, घर बनेपछि मात्र देखिन्छ । मकै रोपेपछि बोटमा घोगा नलागुन्जेल देखिँदैन । बोटले सुत्ला च्यापे मात्र मकैको फलको आशा गरिन्छ । त्यस्तै सरकारले सबै क्षेत्रमा जग हालेको छ । बिउ रोपेको छ । अब अगाडि बढाउने काम बाँकी छ । जस्तै, चीनबाट समुद्रसम्म पुग्ने अधिकारमा सम्झौता भएको छ, त्यो पनि सात ठाउँबाट । यो काम र राष्ट्रिय अधिकार प्राप्ति आजसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन । भारतसँग मात्र भएको यस्तै सम्झौता पनि अपूर्ण थियो । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दौत्य सम्बन्ध बमोजिम थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा विभिन्न पुराना सन्धि पुनरावलोकन भइरहको छ । अब रेलको सञ्जाल विस्तार चीन र भारत दुवै देशबाट हुने सम्झौता भएको छ । यो पनि आजसम्म कुनै सरकारले गर्न सकेका थिएनन् । पहिला हवाइ मार्गको एक मात्र द्वार थियो, अब यसका द्वारहरू बढेका छन् । सङ्घीयताको बलियो जग यही सरकाले हालेको छ । विद्युत् (ऊर्जा) विकासमा तीव्र रूपमा काम चलेको छ । विभिन्न राजमार्ग निर्माण र सुधार तथा ग्रामीण सडकहरूको निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । नेपाललाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि सबै क्षेत्रमा काम अगाडि बढेको छ ।
यस्तै, सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिनमा पनि सरकारलाई विपक्षीले खै सबै ठूला मान्छे पक्रिएको भन्ने आवाज सदनमा र सडकमा उठाएको छ । यो प्रश्न सोध्ने अधिकार सबैलाई छ तर वर्तमान सत्ताको विपक्षी दललाई यो प्रश्न गर्न नैतिक रूपमा पनि नमिल्ने कुरा हो । सुन तस्करी यो सरकार बनेपछि भएको होइन, उनीहरूकै पालमा भएको हो । यति धेरै सुन तस्करी हुदो रहेछ ! यसमा कुरा नमिल्दा अनाहकमा मान्छे मारिँदा रहेछन् तर तत्कालीन सरकार यो विषयमा मौन बस्दा रहेछन् भन्ने कुराको प्रमाण यही हो । उहिलेको सरकारको पालामा भएको तस्करी यो सरकारले उजागर गरेको कुराको विपक्षीले प्रशंसा पो गर्नुपर्ने थियो । हो, जति मान्छे वा वस्तु बरामद गर्नुपर्ने थियो, त्यति भएन कि भन्ने प्रश्न सुधारको निम्ति हुनुपर्ने थियो । सरकारको विरोध यो काममा किन गरिएको छ ? कतै आफ्ना पालामा भएका तस्करी खुल्छन् कि भनेर हो कि त ?
नागरिकता सवालः महिला सांसद भर्सेस पुरुष
सुन्दर बिहानी नआई सुखै छैन